Allgedo.com » 2012 » July » 06
Home » Archive Daily July 6th, 2012 Xildhibaan Cabdullaahi Cabdulle Magan (Bood) oo talabixin usoo jeediyay madax-dhaqameed-yada ku shirayo Muqdisho. Jul 6, 2012 Muqdisho, Somalia (AOL) – Xildhibaan Cabdullaahi Cabdulle Magan oo ka mid ah mudanayaasha Baarlamaanka ee ugu fir-fircoon ayaa madax-dhaqameedyada kula taliyay inay yeeshaan Shir-gaddoon adag si looga gudbo marxaladda adag ee maanta dalka marayo.
Xildhibaan Cabdullaahi Cabdulle Magan (Bood).
Xildhibaan Bood oo u waramay Saxaafadda ayaa odayaasha dhaqanka ugu baaqay, in ay hortaallo hawl culus... Somalia challenges Kenya over oil blocks Jul 6, 2012 * Offshore blocks located in disputed seas
* Border row threatens exploration in new hotspot
* Kenya’s plans to extend continental shelf stalled
NAIROBI, July 6 (Reuters) – Somalia’s government accused Kenya on Friday of awarding offshore oil and gas exploration blocks illegally to multinationals Total and Eni because the concessions lie in waters claimed by Somalia.The... Shirkado Kenya Heshiis kula galay Badda Soomaaliya in ay shidaal ka baartaan Jul 6, 2012 (MA IHI QASWADE) OO ILAAHEY BAA I ARKAYA IN AANAN AHAYN.
Marka ugu horreysa waxaan Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogaanaan usoo gudbinayaa salaan iyo hambalyo ku aadan dabaaldagga 1 Luulyo, salaan kaddib waxaan la socodsiinayaa in ay Keenya heshiis caalami ah kula gashay Shirkado Shiidaal soo saara ayadoo u gudbisay QARIIDAD AAY SI CAD UGU QEEXANTAHAY XADGUDUB loo geysanayo dhul... AMISOM Assumes Formal Command Of Kenyan Forces In Somalia (PRESS RELEASE) Jul 6, 2012 Nairobi-July 6th, 2012; The African Union Mission in Somalia (AMISOM) today assumed formal command of the Kenyan forces in Southern Somalia at a colorful ceremony held at the Kenyan Department of Defense headquarters in Nairobi.
A total of 4664 Kenyan personnel are being integrated into AMISOM, bringing the AMISOM force strength to slightly over 17,000 troops out of a total authorized strength of 17,731.
The... Tarsan “Dastuurkii sideed Sano la diyaarinaayay waxaa lagu bedalay mid maalmo lagu sameeyay oo dan gaar ah laga leeyahay” Jul 6, 2012 Gudoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) oo la hadlaayay Idaacadda VOA Laanteeda Soomaaliga ayaa sheegay in Dastuurkii cusbaa ee lasoo qoraayay mudada Sideeda Sano ah ay bedaleen dad uu sheegay dano gaar inay dastuurka ka leeyihiin.
“Dastuurkii sideed Sano la diyaarinaayay waxaa lagu bedalay mid maalmo lagu sameeyay oo dan gaar ah laga leeyahay laguma... Gudoomiyahii Xarakada Al-shabaab ee degmada Jowhar oo xabsiga la dhigay. Jul 6, 2012 Wararka laga helaayo degmada Jowhar ayaa shegaya in ciidamada Xarakada Al-shabaab ay xabsiga dhigeen gudoomiyahoodii u qaabilsanaa degmadaasi Maxamed C/laahi.
Xariga gudoomiyaha ayaa loo sababeynaayaa ka dib marki la sheegay in uu lun saday raashiin sama fal ah oo loogu tala galay dad barakac ku ahaa degmadaasi.
Gudoomiyaha ayaa ku xiran degmadaasi waxaana la baarayaa eeda ku saabsan inuu lunsaday... Xiisad dagaal beeleed oo ka taagan Gal-gaduud iyo Mudug. Jul 6, 2012 Xiisad dagaal beeleed ayaa lagu soo waramaayaa inay ka taagantahay gobalada Mudug iyo Gal-gaduud halka ay xadka ka wadaagaan, waxaana is heesta beelo walaalo ah.
Waxaa la sheegay in ay isku soo hub uruursadeen beelahaan kasoo kala jeeda Mudug iyo Gal-gaduud iyadoona xiisadaan ay salka ku hayso dagaal horay halkaasi ugu dhex maray.
Wax garadka labadaan beel ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan inay ku... Roobab lagu diirsaday oo xalay ilaa iyo maanta ka da’aaya magaalada Muqdisho. Jul 6, 2012 Magaalada Muqdisho xalay ilaa iyo maanta waxaa ka da’aaya roobab lagu diirsaday, waxaana roobkaan la socda qaboow iyo dabeel xoogan.
In kastoo maanta ay Jumca ahayd hadane roobka ayaa saameen xoogan ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee magaalada Muqdisho.
Wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho waxaa fariistay biyo aad u badan ,waxaana shacabka Muqdisho badi ay yihiin kuwo ilaa xalay... Radio Allgedo/ Waraysiyo